August 2021 – Page2– CELE WINGAGAR
သူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာ စရာစကားလေးြေ ပာလာတဲ့ မင်းသ မီးချော အေးဝတ်ရည်သောင်း…
August 31, 2021 100million 0
မော်ဒယ်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ေ ရာက်လာကြတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းတို့ ညီ အစ်မတွေလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မသိသူမရှိသလောက် ပါပဲနော်… ညီအစ်မ ၃ ယောက်လုံးကလည်း လဲချော အသားအရည်လေးလဲ လှတဲ့အပြင် လူ တိုင်းအားကျရလောက်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးနဲ့ အရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာကြောင့် အပြစ်ပြောစရာမလိုအောင် ပြည့်စုံနေကြသူတွေ ဖြ စ်ပါတယ်။ […]
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင် ဟာ ဇေသီဟနဲ့ လက်ထပ်ထားပြီး သမီးသုံးယောက် မွေးထားပါတယ်နော်။ နန္ဒာလှိုင်တို့  တစ်မိသားစုလုံးကို နွေဦးတော်လှန်ရေး တွင် မပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူများမှ social Punishment လု ပ်နေကြတာပါနော်။ အခုတစ်ခါလည်း နန္ဒာလှို တို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီ သတင်းတစ်ခုထွက်လာပြန် ပါပြီနော်။ […]
ချစ်သူသက်တမ်းလေးနှစ် ကြာတွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူဆီမှ sponsor ယူခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့သ တင်းနဲ့ပ တ်သက်ပြီးပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ထားထက်ထက်…
August 30, 2021 100million 0
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ထားထက်ထက်ဟာ တော ထဲမှာ တော်လှန်ရေးအတွက် အလှူငွေကောက်ခံေ နတာပါနော်။ အလှူခံထားတဲ့ငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ ခဏခဏ သတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့် ထားထက်ထက်ခမျာ စိတ်သောက ရော က်နေရပါတယ်နော်။ မနာလိုသူများမှ ထားထက်ထက် ကို sponsor ယူတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ကြပြန်ပါပြီနော်။ ” […]
ပိုင်တံခွန်နဲ့ပတ်သ က်တဲ့ အမှတ်တ ရလေးတ စ်ခုကို ပ ရိသ တ်ကိုချပြပြီး သူင ယ်ချင်းလေးကို အမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ မေမီကိုကို…
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ MRTV-4 မင်းသမီးလေး မေမီကိုကို ကတော့ ဇာတ် လမ်းတွဲတွေများစွာရိုက်ကူးထားပြီး ပ ရိသတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုအားပေး ချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးမို့  အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုေ တာ့ပါဘူးနော်..။ချစ်စရာကောင်းသ လို သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတာ မို့ ပရိသတ်တွေအားပေးချစ်ခင်ကြ တဲ့ မေမီလေး ကတော့ […]
သားသမီးတvစ်ယောက်တာဝန်မကျေ ခဲ့လို့ ဖခင်အပေါ်နောင်တရ မိကြောင်း ရေးသားလာခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ချစ်သုဝေ ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အ ဆိုတော်လုပ်ရင်း မြန်မာဇာ တ်လမ်းတွေ မှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သ ရု ပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ပ ရိသတ်ေ တွရဲ့အားပေးမှုကို ခံခဲ့ရသူလေးဖြစ် ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဆရာဝန်တစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပေမဲ့ အနုပညာအလုပ်ေ တွကို လုပ် […]
ကြည့်မိသူတိုင်း ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထသွားစေမယ့် တော် လှန်ရေးအငြိ မ့် ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကို တင်ပေးလာတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့….
ကြည့်မိသူတိုင်းကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထသွားစေမယ့် တော်လှန်ရေးအငြိမ့် ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကို တင်ပေးလာတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ မနေ့ညကတော့ အားလုံး ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ စောင့် ဆိုင်းနေကြတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ တော်လှန်ရေး သပိတ် ဟာဒယအငြိမ့် အပိုင်း(၂) ကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ ရဲ့ ထိမိလှတဲ့ […]
ဖခငျကွီး (၁)လ ပွညျ့ လပတျအ တှကျ ဆှမျးကပျ အလှူလေး ကပျလှူခဲ့တဲ့ လငျးအောငျခတျေ….
ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော မျောဒယျလျ သရုပျဆောငျ မငျးသားခြော လငျးအောငျခတျေကတော့ ဒီနမှေ့ာ ဆှမျးကပျအလှူလေးပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အလှူလေးကတော့ ဖခငျကွီး အတှကျရညျစူးပွီးပွုလုပျတဲ့ အလှူလေးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့My Day ကနေ အလှူလေးပွုလုပျတဲ့အကွောငျးကို မြှဝဖေျောပွထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ လငျးအောငျခတျေရဲ့ ဖခငျကွီးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ လက ဆုံးပါးကှယျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပွီး […]
လူတစ်ယောက်ကြောင့် သူ့ရဲ့ဘ ဝပြောင်းလဲ ခဲ့ရလို့ မိဘတွေ ဆီကနေ ပို က်ဆံကိုလက်ဖြန့်တောင်းနေရတဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဟန်ဇာမိုးဝင်း…
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ဖဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး မြန်မာပြည်သူေ တွရဲ့ဘဝက အခက်အခဲမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတော့ တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကို သူတို့ဘက်က ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာေ ကြာင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူေ တွလည်းရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အနုပညာရှင်ေ တွထဲမှာဆိုရင်လည်း (၅၀၅)ကနဲ့ […]
ချစ်သူသက်တမ်း(၄)နှ စ်ပြ ည့် သွားတဲ့အ ချိန်မှာ ချစ် သူနဲ့ရိုတ် ကူး ထားတဲ့ပုံရိ ပ်လေးတွေကို ချပြလာတဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ေ ဆာင် မေ…
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မေ ကတော့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ အားပေး ချစ်ခင်ေ နတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ချိုသာတဲ့ အသံနဲ့ သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သီဆိုနိုင်တာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝရ ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် အမျိုးသမီးပရိ သတ်တွေ […]
အင်ျကြီအသဈ လေးတှနေဲ့ လှနတေဲ့ သားသား မီးမီးလေး တှကေို ကွညျပွီး ကနြေပျပီတိဖွဈနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ…
ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့ဂဟောက ကလေးတှနေဲ့အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝဖေျောပွလာခဲ့ပါတယျ ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ မကွာခဏဆိုသလို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျ ရကျစာမကျြနှာကနေ ကလေးတှနေဲ့ ပုံလေးတှကေို တငျလေါရှိပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာလညျး ခိုငျနှငျးဝကေ သူ့ရဲ့သားသားမီးမီးလေး တှကေို […]